Isi ebe na nleta na Victoria, Australia | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Australia, Oceania, Ihe ị ga-ahụ
Victoria bụ steeti Australia nke abụọ pere mpe mgbe Tasmania dị, ma dịkwa na ndịda ọwụwa anyanwụ ụsọ oké osimiri. Ọ bụ ezie na ọ pere mpe, steeti a nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye ndị ọbịa ya, ọkachasị n'ụsọ osimiri na okike. Ma, na Victoria enwere ọtụtụ ihe, ọ bụkwa na mpaghara a anyị chọtara ya obodo melbourne, ya na egwuregwu obodo ya.
Dị ka anyị kwuru, enwere ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ na Mpaghara Victoria, ọ bụ ezie na anyị ga-arụtụ aka n’ihe abụọ dị mkpa anyị na-agaghị echefu. Otu bụ obodo Melbourne, marakwa nke ọzọ dị ka Ndịozi iri na abụọ, usoro okwute n'ụsọ osimiri gafere ụwa niile, nke ahụ na-echetara anyị Osimiri Katidral nke Lugo.
1 Melbourne obodo
2 Okporo Oceanzọ Oké Osimiri na Ndị-ozi iri na abụọ
3 Anụ ọhịa na Phillip Island
4 Ibi ndụ ntụsara ahụ na Mornington Peninsula
5 Choputa ubi vaịn nke Yarra Valley
Nke a bụ obodo kachasị mkpa na mpaghara Victoria. Dị ka anyị ga-enwe ọtụtụ oghere dị iche iche iji nwee ọ enjoyụ, ọ dị mma mgbe niile ịkwụsị na nnukwu obodo dị ka Melbourne. N'ime ya anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ntụrụndụ. Gagharịa na mpaghara bohemian nke St. Kilda wee nwee ọ enjoyụ na tram ya, zụta ngwaahịa ọhụrụ na nke mpaghara na ahịa ikuku n'èzí, gaa na Melbourne Museum ma ọ bụ Halllọ ngosi ngosi, lelee egwuregwu cricket ma ọ bụ egwuregwu bọọlụ nke Njikọ Australia bụ naanị ụfọdụ ihe anyị nwere ike ime n’obodo a. Nke kachasị, bụ na ọ bụrụ na asphalt agwụ anyị ma ọ bụ merie anyị, na obere ụzọ anyị nwere ike ịchọta nnukwu ubi vaịn, oke okike okike na oghere ndị ọzọ. Nke a bụ ọmarịcha amara nke Australia na obodo ya.
Okporo Oceanzọ Oké Osimiri na Ndị-ozi iri na abụọ
Kwọ ụgbọala n'okporo ụzọ Oké Osimiri Ukwu na-akpọga anyị ozugbo ndị ịrịba 12 Ndịozi, usoro okwute nke ihe dịka nde 20 afọ gara aga jikọtara na ọnụ ọnụ ugwu nke ụsọ oké osimiri, mana nke ahụ n'ihi mbuze mmiri na ifufe na-agabiga ruo mgbe ha dịpụrụ adịpụ. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme na mpaghara a, dị ka ịnụ ụtọ ịgagharị n'ụsọ osimiri, ịga ije na steepụ Gibson gbadata n'elu ugwu ahụ, ma ọ bụ ịmụ akụkọ banyere ụgbọ kpuru. Enwere ọbụna ebe ndị na-enye njem helikopta iji hụ usoro okwute dị egwu nke na-abanye n'oké osimiri ahụ nso. Otu n'ime ebe kachasị mma ịnụ ụtọ okike dịka ọ dị. Na mgbakwunye, ekwesiri iburu n'uche na nkume ndị ahụ na-agbada na ọnụego ihe dị ka centimita abụọ kwa afọ, yabụ oge ga-abịa mgbe ọ na-agaghị adị, yabụ na ọ bara uru ịhụ ha na ịma mma ha niile.
Anụ ọhịa na Phillip Island
Naanị 90 nkeji si Melbourne anyị nwere ike ịmikpu onwe anyị na Anụ ọhịa Phillip Island. Otu n'ime ihe ngosi bụ Penguin Parade, nke na-eme kwa ụbọchị. Ndị njem nleta nwere ike ịbịaru ụsọ osimiri nke onye na-elekọta ogige na-eduzi iji hụ penguins na-aga n'akụkụ osimiri n'akụkụ ọnụ ọgụgụ buru ibu mgbe ụbọchị azụ azụ nke oke osimiri gasịrị. Mana obughi nani ngosi a na-adọta ọtụtụ narị ndị njem, mana n'àgwàetiti a ị nwekwara ike ịga na Koala Conservation Center ma ọ bụ ugbo nke bụ ọdịbendị ọdịbendị, nke a na-akpọ Churchill Island Heritage Farm, nke dị nso Seal Rocks, ebe ị nwere ike ịhụ ógbè ọdụm ọdụm. Osimiri ya makwaara ama maka inwe nnukwu ọnọdụ maka sọọfụ, dịka ebe a na-akpọ Woolamai Beach.
Ibi ndụ ntụsara ahụ na Mornington Peninsula
Nke a bụ ebe dị nso na obodo Melbourne, ya mere enwere ike ịhụ ya na njem na-amalite n'obodo ahụ. Na Mornington anyị nwere ike ịmata ihe bụ ndụ dị jụụ na mpaghara a nke Australika. Nnukwu ụlọ obibi akụkọ ihe mere eme, ahịa ndị obodo nwere ngwaahịa na ngwaahịa dị mma, ogige ntụrụndụ, ọdịdị na ọtụtụ ubi vaịn. N'ebe a, ụdị mmanya dị iche iche bụ nke pinot noir na chardonnay. Ihe ọzọ na-eme ka ndị mmadụ bịaruo nso na mpaghara a bụ spas na ebe dị ọkụ, yabụ izu ike zuru ezu. Na mmechi, enwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ golf ya na kọfị dị na Portsea.
Choputa ubi vaịn nke Yarra Valley
Ọ bụrụ na ndị Yarra Ndagwurugwu mara maka ihe, ọ bụ maka inwe nnukwu ubi vaịn nke na-emepụta mmanya na-egbu maramara na pinot noir, n'etiti ụdị ndị ọzọ na-ewu ewu. Mpaghara ebe ihe na-adọrọ mmasị na-enweghị obi abụọ ga-enwe obi ụtọ ọbịbịa na wineries na ubi vaịn mara mma, nke na-enye ọhụụ na-enweghị atụ. E nwere ihe karịrị mmanya iri atọ dị iche iche ebe ahụ, mana ọ bụkwa ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ngwaahịa ndị ọhụrụ, yana mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri sitere na organic ma ọ bụ salmon na trout. Na mpaghara ahụ, e nwekwara ebe a na-eme biya biya, na-eme ka ọ bụrụ ebe kachasị mma maka ndị hụrụ gastronomy.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Oceania » Australia » Isi ebe na nleta na Victoria, Australia
Ihe nlegharị anya kachasị mma nke Paris